musha >Products >Picket fence
Picket fence inorudzi rwefence inowanzoshandiswa nenzira inoenderana nemiganhu yepamberi, inoratidzirwa nemabhodhi avo akaenzana akaenzana, mapiketete, akachengetwa kusvika kumapuranga asinganzwisisiki. Picket fences zvakapararira mukati medu, nechepheno dhenje rinodzoka kuratidza bourgeois yakakwana yekugara kweruwa rwehupenyu. kusvikira kushandiswa kwekutengeserana mukati meEighties, masango echekricket dzimwe nguva akapoteredzwa nemasvingo emakanda.
Picket fences zvakapararira mukati medu, pose apo mafashoni ave achishandiswa kubvira munguva yekutanga yeAmerica uye yakaramba ichipararira nhasi. ivo vakave svumbidzo yekuonga kuva nemhuka dzepanyama nevechidiki apo pasina kuongororwa maonero, uye vanoshandiswa kumativi ose mberi uye kumashure yadhi. zvinyorwa zvekare zvekare zvakasikwa kunze kwehuni uye zvakavezwa zvitsvuku (kana kuti zvakashambidzwa), asi ikozvino mazhenje akawanikwa zvakanyanya muvinyl resin (PVC).
Danda iri makumi matatu kusvika matanhatu masendimita masendimita (91 kusvika 122 cm) yakareba. A horizontal prime rairi uye gorosi rapasi zvakasungirirwa kumapuranga epamusoro, izvo zvinowanikwa zvakananga kusvika pasi. mabheji akaenzana akaenzana akataridzika kumasara. Aya mapuranga ane nheyo dzepamusoro anozivikanwa se "pickets" nokuda kwechimiro chake kune zvigadzirwa zvakatsanangurwa zvinowanzoshandiswa netsoka kuti dzifurise vatasvi vemabhiza.
Picket fences yakagadzirwa kubva kumarudzi akawanda emhando. nenzira yekuti, matanda ave ari chinhu chakanyanya kuparadzirwa chakashandiswa pamatare emucheka. Iyi huni haina kutorwa, kurapwa, kana zvipembenene zvakasikwa uye kuora kusagadzikana. Kusiyana kwekusarudzwa kwehuni kunowanika; uyewo vinyl, aluminium, uye PVC.
Nei Munhu Wose Achikutaura Pamusoro Pengero Ganda?
vinyl picket fence / low maintenance, hauzombofi wakanetseka pamusoro pekugadzira kana kushatisa zvakare.
white vinyl picket fence / zvakanyanya kugadziriswa kupfuura huni
Picket fence panels have an image picture, ancient vogue. Picket fences inonyanya kufanira mberi kwejindu uye kugadzira muganhu asi kwete kubvisa chero maonero. Nzira dzedu dzakasiyana dzekuvhara rusvingo dzinoumbwa kubva pamhando yepamusoro pvc kusimbisa sturdiness. Fence panels inopiwa nehembedzana yakazara kana flat flat, uye inowanika mu 3ft uye 4ft zvikomo. isu tine chido chemukoko wega wega kuvharwa uye kunomanikidzwa kubata chirongwa chekuchera, saka iwe uchasarudza mukana wekuti iwe pachako uwane munda. Nzvimbo dzedu dzakasiyana-siyana dzakabatwa nekambani yekudzivirira inofanirwa kana iwe uri kutsvaga kugadzirisa kushandiswa kwema munda munda.
Inozivikanwa kune imwe neimwe minda yegadheni uye kugovera nzvimbo dzekurima minda, paling panels inofadza uye yekare. kubvumira chiedza-kurema kushanda pasi pasi kubatsira masimera kukura, asi vachiri kuchengetedza vana uye zvipfuwo zvakachengeteka, zviri nyore kushanda nei chikonzero chikuru chakadaro chekuenda kumatare.
Inoshamisa, yakasimba uye yakavimbika - izvi nguva zhinji zvakanaka zvedu zvakasiyana siyana zvepalisade vogue picket cheni. rakagadzirwa neFSC rakagadziriswa pvc kuti risimbise rakanakisisa yenhengo yepamusoro, inowanikwa mune zvakasiyana-siyana zvepamusoro kuitira kuti isvike imwe neimwe yepamberi kana yegindu rako.
Rudzi urwu rwekudzivirira runopa mari yakaisvonaka yemari uye inogona kunge iine nguva yekubudisa feni ye picket vogue yakakomberedza marquee kana club club. Yakadzikidzwa kubva pamusoro pevinyl yepamusoro, aya masvingo ane feni ane 95mm yakafara, mapurisa ane 16mm akatsigirwa ne3 marefu emadziro kuti aumbe feni yepamusoro uye yakasimba. isu tine zvikwiriso zvakasiyana-siyana uye maitiro paunopa saka iwe unonyatsocherechedza zvauri kutsvaga pano.
PVC picket fence masuo inoshandiswa kushungurudza zvinhu zvakafanana sefence yako. iwe uchasarudza kubva kumarudzi akasiyana-siyana kana maumbirwo anokwanisa kuenzanisa kana achagadzirwa kuti amire-kunze achiita chimwe chinhu.
Iyo hardware inoshandiswa yakanyatsorongedzerwa kushandiswa nePVC cheni uye yakasikwa yezvinhu zvakanakisisa zvezvinhu. Hinges anoshandiswa inogadziriswa kumusoro, pasi, mukati nekunze. izvo zvinoreva kuti iwe uchanyatsoziva uye unonyatsoteerera masuo ako.
Gates zvakasikwa achishanda subframe yesimbi, uye kuverenga pachiyero chegedhi tava kuwedzera kuwedzera musimbi wesimbi.
Gates anoshandisa zvakafanana Vinyl profiles senhare yako, iyo inoreva kuti suo rako rinogona kusungirirwa kusanganiswa mufence yako. Kana kuti ichasikwa kutarisana nekunze.
Sangano redu rekugadzirira richaita kuti musimboti wako uve seni rakakodzera yefence yako.
Nzira yekuisa sei Picket Fence
Pane zvinhu zvishoma sekupisa uye kugamuchira vaeni semucheno chena chena. Imwe yakanyatsogadziriswa uye yakaiswa mufenzi ichaita kuti nzvimbo yeimba ive yakanaka, ichitarise mitsara yeimba uye uwedzere chikamu chiduku chisingaverengeki chekuchengeteka. Kuvaka fence kubva pakutanga, kunyange pfupi shoma, inotora chaiyo] zvishoma zvishoma uye inoda arsenal yemapuranga midziyo.
Nenzira inofanirwa kushandiswa kwemadziro edzimba inovaka iyo yakawanda nyore nyore kune iyo chaiyo yeimba-muridzi wekuisa mufenzi yavo pachavo. Iko kusanganisa kwakagadzirwa masvingo kunowanikwa muhutachi hwakanaka hwemasikisi uye zvigadzirwa, pamwe ne picket, kugadzika, uye nzvimbo yakakosha.
Iyo yakaoma zvikuru chikamu chepi zvese yekuisa fence iri kusika nekubvisa zvinyorwa. huwandu hwezvinetso, kwete zvinoshamisa, hunoenderana nehutanda urefu uye yakaoma zvikuru yevhu. Kwepambo duku, shandisa bhuku rinotevera-gomba digger. Zvisinei, kana iwe une makumi gumi nemaviri pedyo nemakomba okuchera, fungisisa mutengesi kune gasi-inowanikwa mushure megomba.
Nzira Yokuvaka A Picket Fence
Nhanho imwe - iwe uchakwanisa Kuchengeta Ichi
Shandisa gomba diggers kana kuti chiremera chekugadzira kuita masango maererano ne24 "yakadzika, makumbo mana ari oga.
Sarudza zvisinei kuti wakareba sei iwe unoda fence yako (kazhinji pakati pe 24 "ne 42") uye wongowedzera pamusoro pei 2 tsoka kune iyo. (iwe uchadzoka uye unocheka iyo ace pane imwe nguva gare gare)
Ita zvigadziro, plumb uye sq. Kusvika kumugwagwa wefence yako, uye gadzikisa pasi mukrete.
Nhanho mbiri - Kumira kunze
shandisa danda remberiZvirokwazvo mapuranga acho akaiswa uye uye krete yakaoma. Simbira mutsetse wepamusoro pane zvese zvemashoko ako pazinga rimwe mukati. Shandisa "line level", uwandu hwemvura, kana huwandu hwezuva nezuva uye mubatsiri kuti aumbe imwe mutsara wako unhu.
Nyora nzvimbo dzose pamucheto wetambo. ndiyo nheyo yepamusoro-soro ye2 × 4 hanger hanger, yakapiwa kubva muchivakwa chako chekuzvarwa inopa soro. Sezvo fence iri kuve yakanyatsoiswa muchena, ini handinetseki kuti zvishoma zvesimbi zvingave zvichiri kuratidza. kushungurudzwa kwevaranda kunoita kuti basa rikurumidze.
Danho rechitatu - Pasi, asi pabhodhi.
Runomanikidzwa kunomanikidza 2 × 4 mapurisa kubva kune hanger kuisa hanger, pakati pemapato. Kana iwe wakave wakaita mutsara wako wakarurama, pane zvaunoda kuti ubudise huwandu humwe zvakare. uyewo mahwendefa anogona kukupa imwe nguva pamwe chete nekucheka kwako. Iko kunobata pfupi kwakanaka kwenguva yakareba nekuti yakagara zvakanaka mukati mehuni hanger.
Ita pasi kubva kune hanger yakakwirira uye uise zvose pasi pako pasi panoita zvakananga kure. zvishoma kana zvishoma 6 "pamusoro pepasi kusvika pasi pegango.
Danho rechina - Slat Happy
Bvisa slats kunze kwekumanikidzwa kunobatwa 1 × 4's. ini ndaisa bhodhi zvakananga kumativi ose (kubata nzara yakawanda yesimbi hanger), zvino gara pakati pavo nekuona nguva dzose. Usanetseka nekuwanda kwakanyanya. Kana iwe uchifanira "kubvarura" bhodhi semugumisiro wekuparadzaniswa kwako kunobva kunze, hazvisi basa guru. Hupenyu hunoenderera mberi.
Iwe unogona kuuputira izvi kana kuisungirira pamisungo yechipikiri. iwe haukwanisi kuisungirira ne nyundo zvakanyanya nekuda kwekugunun'una uye kuzununguswa kwakapoteredza. Kana iwe ukasarudza kushandisa zvigadzirwa iwe unofanira kusvika pane chisarudzo kana uchida kufamba kubva mberi kana shure.
Kana iwe uine mubatsiri, iwe uchakwanisa kuuputira kubva kumamiriro ekure uye usati uone chero vashandi kubva mberi, zvisinei kuti zvinotora vanhu 2 semugumisiro webhodhi inofanira kunge yakanyatsosimbiswa zvakasimba mu situ.
Jovyea inyanzvi yekugadzirwa kweChinese (factory / wholesaler / suppliers) iyo inofunganya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwemapurofiti emipungetheni.Our chain chain inozadza, yakanaka, yakanaka. Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.